खन्दै गरेको खेतमा भिटियो हिराको खानी ! भाग्य चम्किएपछि मजदुरबाट बने करोडपति – List Khabar
Home / समाचार / खन्दै गरेको खेतमा भिटियो हिराको खानी ! भाग्य चम्किएपछि मजदुरबाट बने करोडपति
admin 1 week ago समाचार Leaveacomment 76 Views
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार त्यहाँ हरेक रात लाखौं मानिस बन्छन् । सोमबार पनि त्यस्तै भयो, त्यहाँ हीराको खोजी गर्ने दुई मजदुरको भाग्य चम्कियो । यो पन्नाको किटहा गाउँको एक घटना हो । त्यहाँ एक श्रमिकले हीराको खानी भेट्टाएका हुन् ।
त्यो खानीमा काम गर्ने मजदुरहरू एक होईन दुई चम्किरहेका हीराहरू भेट्टाए । मजदुर भगवान दास कुशवाहाले उनका अन्य चार सहकर्मीसँग हिराको कार्यालयबाट भाडामा लिएर हिरा खानी बनाएका थिए । उनले चाल धुने क्रममा दुईवटा हीरा फेला पारेका हुन् ।
आजतकका अनुसार पहिलो हीरा ७.९४ क्यारेट छ र दोस्रो हीरा १.९३ क्यारेट छ, जसलाई हीरा कार्यालयमा जम्मा गरिएको छ । ७.९४ क्यारेट हीरालाई अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो हीरा मान्ने गरिएको छ ।
अनुमानित मूल्य ५६ देखि ७२ लाख रूपैयाँ रहेको छ । कामदारले भने कि हीरा लिलामीबाट प्राप्त पैसाको साथ, उनले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्नेछन् । उनले आफुसँग भएको सबै ऋण तिर्ने भनेका छन् ।
उहि समयमा पन्नाका कलेक्टर संजय कुमार मिश्रले कसैलाई पनि भाग्यले मजदूरबाट राजा बनाउँने बयान दिएका छन् । मजदुरहरू द्वारा प्राप्त हीरा चम्किलो छ,
जुन अर्को महिना लिलामीको लागि राखिनेछ । हीरा पाउँदा मजदुरहरुमा खुशीको वातावरण छ । यसले उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई पूर्ण रूपले परिवर्तन गर्दछ । यस अवसरमा जिल्ला कलेक्टरले मजदुरहरुलाई माला लगाएर सम्मान गरेका छन् ।
Previous नवनियुक्त गृहमन्त्री अधिकारी भन्नुहुन्छ : जनताको काममा ढिलासुस्ती र अटेर गर्ने छुट अब कसैलाई हुदैन ।
Next अबको ६ महिनाभित्र नेपाल यस्तो डरलाग्दो हुने छ अवस्था, विज्ञले दिए यस्तो सङ्केत